Waa maxay nolol maalmeedka khabiirka badda? Ma inaad leedahay lugaha badda si aad u jimicsato "xirfad baddeed"? Intaa waxaa dheer, marka laga reebo badmaaxiinta, waa maxay xirfadaha ku xiran badda? Iyo koorsooyinkee la raacayaa si loo jimicsado?
Ganacsiyo badan oo badda la xiriira ayaa lagu dhaqmaa dhanka berriga, mararka qaar xitaa boqolaal kilo mitir ayaa xeebta u jira. Waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo kala duwanaanta hawlaha qaybta badda, MOOC-dan waxay iftiimin doontaa iyaga iyada oo loo eegayo afar arrimood oo bulsho oo waaweyn: Ilaalinta, Horumarinta, Quudinta iyo Socodka.
Sidee looga qaybqaadan karaa si loola kulmo caqabadaha ka imaanaya ilaalinta kheyraadka badda, horumarinta hawlaha xeebaha ama tamarta badda ee la cusboonaysiin karo? Marka laga soo tago injineerada iyo farsamayaqaannada, waa maxay sababta dhaqaaleyahannada, juqraafiyada, sharci-yaqaannada, ethnologists iyo geologists ay iyaguna safka hore uga jiraan si ay ula kulmaan caqabadaha ka dhalanaya nugulnaanta sii kordheysa ee dhulalka xeebaha?
Ganacsiga badda Diisambar 17, 2021Tranquillus
READ Cunnooyinka kali ah, dambiilood oo laga baxo, shaqada teleefonka… Maxaa loogu talagalay hab maamuuska caafimaadka shirkadaha cusub
socdaKu dhiiran inaad ka shaqeyso warshadaha mustaqbalka